Umkhiqizi Nomhlinzeki WaseChina Flange | I-Kingmetal
Flanges - Imininingwane Jikelele
Le flange ifakwe ngaphakathi kohlangothi entanyeni yayo okusho ukuthi ubuqotho bendawo eboshiwe bungahlolwa kalula nge-radiography. Amabore womabili amapayipi ne-flange match, anciphisa uthuthuva nokuguguleka ngaphakathi kwepayipi. Ngakho-ke intamo ye-weld iyathandwa ezinhlelweni ezibucayi
Le flange ishibilika phezu kwepayipi bese i-fillet yashiselwa.Slip-on flanges kulula ukuzisebenzisa ezinhlelweni eziqanjiwe.
Le flange isetshenziselwa ukuvala amapayipi, ama-valve namaphampu, futhi ingasetshenziswa njengesembozo sokuhlola. Kwesinye isikhathi kubhekiselwa kuye njenge-flange engenalutho.
Le flange ibhekene nesithukuthezi ukwamukela ipayipi ngaphambi kokuthi i-fillet ishiselwe.Ibhola lepayipi kanye ne-flange zombili ziyizici ezifanayo zokunikeza ukuhamba okuhle.
Le flange ibizwa ngokuthi ifakiwe noma ifakwe isikulufu. Isetshenziselwa ukuxhuma ezinye izinto ezifakiwe ezicindezelweni eziphansi, izinhlelo zokusebenza ezingabalulekile. Akukho ukushisela okudingekayo.
Lawa ma-flanges ahlala esetshenziswa noma ngesiphetho sesipikili esifakwe ngepayipi nge-flange evulekile ngemuva kwaso. Lokhu kusho ukuthi isiphetho se-stub sihlala senza ubuso. Ijoyinti le-lap liyathandwa ezinhlelweni zokusebenza ezinengcindezi ephansi ngoba ihlanganiswe kalula futhi iqondaniswe kalula. Ukwehlisa izindleko lawa ma-flange anganikezwa ngaphandle kwehabhu kanye / noma ekwelapheni, insimbi yensimbi ebunjiwe.
Uhlobo Lwezingcingo Oluhlangene
Le kuyindlela yokuqinisekisa ukuvuza kokuxhumeka kwe-flange izingcindezi eziphezulu. Indandatho yensimbi icindezelwa emgodini onamacala ayisithupha ebusweni be-flange ukwenza uphawu. Le ndlela yokuhlanganisa ingasetshenziswa ku-Weld Neck, Slip-on naku-Blind Flanges.
UFlange WeldingNeck, Slipon, Blind, Plate, ThreadedFlange, SocketWeldFlange
Okujwayelekile ANSI I-ANSIB16.5, ASMEB16.47seriesA (MSS-SP-44), ASME
I-B16.47, seriesB (API605)
IDINI I-DIN2630-DIN2637, DIN2576,2502, i-DIN2527, i-DIN86030
GOST I-GOST12820-80, i-GOST12821-80
I-UNI I-UNI2280-UNI2286, UNI2276-UNI2278, UNI6091-UNI6095
Izinto ANSI I-CSA105 / A105NA350LF2ss304 / 304L, 316 / 316L
IDINI CSRST37.2, S235JR, P245GH, C22.8, SS304 / 304L, 316 / 316L
EN I-CSRST37.2,5235JR, P245GH, C22.8, SS304 / 304L, 316 / 316L
I-UNI CSRST37.2,5235JR, C22.8, SS304 / 304L, 316 / 316L
Ingcindezi ANSI I-Class150,300,400,600,900,1500,2500lbs
IDINI PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100
I-UNI PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100
Usayizi ANSI 1/2 * -120 "
Ukumboza i-anti-rustoil, i-varnish, i-yellowpaint, i-blackpaint, i-galvanizingetc
Ukusetshenziswa Ukusebenziswa kokuxhunywa kwemikhiqizo yonke,
umusi, umoya, uphethiloli
Iphakheji Ama-plywoodcases / pallets
Langaphambilini Izindwangu Zekhwalithi ephezulu ye-Carbon Steel Weld
Olandelayo: Hot lashukumisa lashukumisa oluthambile Iron Pipe lokulinganisa yokukhiqiza ubuhlalu